Kungani Ungafanele Uthenge Iwebhusayithi Entsha Futhi | Martech Zone
Lokhu kuzoba yisibibithwane. Alipheli isonto ngingenazo izinkampani ezingibuza ukuthi sikhokhisa malini ngo-a website entsha. Umbuzo uqobo uphakamisa ifulegi elibi elibomvu elisho ukuthi kungukuchitha isikhathi kimi ukulandela njengekhasimende. Kungani? Ngoba babheka iwebhusayithi njengephrojekthi ye-static enesiqalo nendawo yokugcina. Akukona… kuyindlela okufanele ilungiselelwe njalo futhi ilungiswe.
Amathemba Wakho Angaphezu Kwewebhusayithi Yakho
Ake siqale ngokuthi kungani unewebhusayithi okufanele uqale ngayo. Iwebhusayithi yingxenye ebucayi ye- ubukhona bedijithali jikelele lapho kwakhiwa khona idumela lakho futhi unganikeza imininingwane edingeka kakhulu kumakhasimende angaba khona. Kunoma yiliphi ibhizinisi, ukuba khona kwabo ngokwedijithali akuyona nje iwebhusayithi yabo… kufaka:
Izindawo Zokukhomba - ziyavela kumasayithi lapho abantu bafuna umkhiqizo noma insiza yabo? Mhlawumbe yi-Angi, Yelp, noma ezinye izinkomba zekhwalithi.
Izilinganiso nezindawo zokubuyekeza - Kanye nezikhombisi-ndlela, ingabe ziyavela kumasayithi wokubuyekeza futhi ngabe baliphatha kahle lelo dumela? Ingabe bacela ukubuyekeza, babaphendule, futhi balungisa izibuyekezo ezingezinhle?
YouTube - Ngabe banamavidiyo ku-YouTube aqondiswe emakethe nasembonini yabo? I-YouTube iyinjini yokusesha yesibili ngobukhulu futhi ividiyo iyindlela ebalulekile.
Amasayithi Wethonya - Ingabe kukhona amasayithi nobuntu obunethonya obunokulandelwa okubanzi okuvela kuzethameli ezabiwe? Ngabe uphishekela ukwaziwa kulawo masayithi?
Ukucinga Engines - Abathengi balufuna ngenkuthalo ulwazi online ukubasiza kwinqubo yabo yokwenza izinqumo. Ingabe ukhona lapho bebheke khona? Ingabe unayo umtapo wokuqukethwe lokho kusesikhathini njalo?
Social Media - Abathengi babheke izinhlangano eziku-inthanethi ezinikezela ngenani eliqhubekayo futhi eziphendulayo kumakhasimende. Ngabe ubasiza ngenkuthalo abantu eziteshini zenhlalo nakumaqembu aku-inthanethi?
imeyili Marketing - Ngabe uthuthukisa uhambo, izincwadi zezindaba ezinolwazi, neminye imithombo yezokuxhumana ephumayo esiza abathengi abazohamba kulolu hambo?
Ukukhangisa - Ukuqonda ukuthi kufanele kusetshenziswe kuphi futhi kangakanani isabelomali ukuthola imikhondo emisha kuyo yonke i-inthanethi akufanele nanini kunganakwa.
Ukuxhumanisa ubukhona bakho bedijithali kuyo yonke into nesiteshi kuyisidingo esiphelele kulezi zinsuku futhi kungaphezu kokwakha nje kuwebhusayithi entsha.
Iwebhusayithi Yakho Akufanele Ibe Kwenziwe
Iwebhusayithi yakho ayikaze Kwenziwe. Kungani? Ngoba imboni osebenza kuyo iyaqhubeka nokuguquka. Ukuba newebhusayithi kufana nokuba nomkhumbi ozulazula kuwo ngamanzi avulekile. Udinga ukuzivumelanisa njalo nezimo - noma ngabe kungabancintisana nabo, abathengi, ama-algorithms ezinjini zosesho, ubuchwepheshe obuvelayo, noma nemikhiqizo nezinsizakalo zakho ezintsha. Kufanele uqhubeke nokulungisa ukuzulazula kwakho ukuze uphumelele ekuheheni, ekwaziseni, nasekuguquleni izivakashi.
Udinga esinye isifaniso? Kufana nokubuza kothile, “Kubiza malini ukuthola impilo?”Ukuthola impilo enempilo kudinga ukudla okunempilo, ukuzivocavoca umzimba nokwakha umfutho ngokuhamba kwesikhathi. Kwesinye isikhathi kuba nezingqinamba ngokulimala. Kwesinye isikhathi kuba nezifo. Kepha ukuba nempilo akunayo indawo yokugcina, kudinga ukunakekelwa okuqhubekayo nokulungiswa njengoba sikhula.
Kunezinguquko eziningi ezidinga ukukalwa njalo, ukuhlaziywa, nokwenza ngcono kuwebhusayithi yakho:
Ukuhlaziya Ukuncintisana - ukulungiswa nokwenza kahle ukuze uzihlukanise nomncintiswano wakho. Njengoba bakhiqiza okunikezwayo, babelana ngokwabelana, futhi balungisa umkhiqizo wabo neminikelo yesevisi, kakhulu wena.
Ukuguqulwa kokuguqulwa - ingabe umkhuba wakho wokuqoqa umkhondo noma amakhasimende ayanda noma ancipha? Ukwenza kanjani kube lula? Ingabe unayo ingxoxo? Chofoza ukuze ushaye? Amafomu asebenziseka kalula?
I-Emerging Technologies - njengoba ubuchwepheshe obusha bulindelekile, ingabe uyabusebenzisa? Isivakashi sewebhusayithi yanamuhla silindele okuhluke kakhulu, sifuna ukuzenzela. Isibonelo esisodwa esihle ukuhlela ukuhlela.
Intuthuko Yomklamo - umkhawulokudonsa, amadivayisi, osayizi besibuko ... ubuchwepheshe buyaqhubeka nokuthuthuka nokwakha umuzwa womsebenzisi owamukela lezi zinguquko kudinga ushintsho olungaguquguquki.
Search injini - izinkomba, amasayithi wolwazi, okushicilelwe, izingosi zezindaba, kanye nabancintisana nabo bonke bazama ukukushaya ezinjini zokusesha ngoba labo basebenzisi banenhloso enkulu yokuthenga. Ukuqapha amazinga wakho wegama elingukhiye nokwenza ngcono okuqukethwe kwakho kubalulekile ukuze uhlale phezulu kwalesi sixhobo esibucayi.
Noma ngabe iyiphi i-ejensi yezokumaketha noma uchwepheshe oyiqashayo kufanele wazi kahle imboni yakho, umncintiswano wakho, umehluko wakho, imikhiqizo yakho nezinsizakalo, ukufaka uphawu kophawu lwakho, necebo lakho lokuxhumana. Akufanele bamane nje bahlekise ngomklamo bese bebeka amanani entengo yokwenziwa kwalowo mklamo. Uma lokho konke abakwenzayo, kufanele uthole umlingani omusha wokumaketha ozosebenza naye.
Tshala Imali Kuhlelo Lokumaketha Ngedijithali, Hhayi Iphrojekthi
Iwebhusayithi yakho iyinhlanganisela yetheknoloji, ukwakheka, ukufuduka, ukuhlanganiswa, futhi - nakanjani okuqukethwe kwakho. Usuku usuku lwakho website entsha bukhoma akusona isiphetho sephrojekthi yakho yokumaketha yedijithali, ngokoqobo uSuku 1 lokwakha ubukhona bokumaketha kwedijithali obungcono. Kufanele ngabe usebenza nomlingani okusizayo ukukhomba uhlelo lokuphakwa jikelele, ukubeka phambili isigaba ngasinye, nokusiza ukwenza lokho.
Noma ngabe lowo umkhankaso wokukhangisa, ukwakha isu levidiyo, ukwenza imephu ohambweni lwamakhasimende, noma ukuklama ikhasi lokufika… kufanele utshale imali kuzakwethu oqondayo ukuthi konke kusebenza kanjani ngokubambisana. Isincomo sami kungaba ukuphonsa isabelomali sakho sewebhusayithi futhi, esikhundleni salokho, unqume ukutshala imali ofisa ukukwenza inyanga ngayinye ukuqhubeka nokwenza isu lakho lokumaketha ledijithali.
Yebo, ukwakha i- website entsha kungaba yingxenye yalelo su eliphelele, kepha inqubo eqhubekayo yokuthuthuka… hhayi iphrojekthi okufanele iqedwe.
Tags: agencyukuthuthuka okuqhubekayoukuguqulwa kokuhlelwaIwebhusayithi entshaisabelomali sewebhusayithiizindleko zewebhusayithiwebsite design